विष्णु नेपाल, चतुराले (नुवाकोट), २८ पुस । गर्भवती महिला सुत्केरी भएपछि आउने रगत, पिपलगायतका फोहरले भिजेका कपडा सफा गरिदिने पनि सरकारी स्वास्थ्यकर्मी होलान् ?
प्रमुख भटृराईले भन्नुभयो “तपाईका घरमा गर्भवती महिला हुनुहुन्छ ? भनेर गाउँका पुरुषलाई सोध्यो चिकित्सक भएर स्वास्थ्य चौकीमा बसेर ट्याबलेट बाड्नु नि, किन चाहियो खोजीनिती भन्ने जवाफ दिए । तपाई त गर्भवती हुनुभएजस्तो छ, पेट बढेछ नि भनेर महिलाई सोध्दा खुलेर भन्न नचाहने तर हरेस खाइन् ।
भेटघाट हुनेसित गर्भवती भएपछि आउने जटिलता, यसबाट शिशुमा पर्नसक्ने असर, पोषणको महत्व, स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी गराउँदा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा देखिने समस्याबारे जनचेतना जगाउनमै दिन बिताए । अरु सेवालाई भन्दा प्रजनन स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएँ । प्रमुख समस्या र चुनौती पनि यही थियो ।”